Indlela yokwenza iimveliso zakho zibonakale xa umntu efuna i-Amazon ejoliswe kuyo?
Ngokutsho kwamanani ashishino lwakutshanje, i-55% yazo yonke imveliso ye-intanethi isesha kwi-Amazon. I-Amazon yaba yindawo ephandwayo yokuphenya ngaphezu kweGoogle ngokuphathelele uphando lwemveliso. Kunyaka ophelileyo, eli lizwe elidumiweyo lokubuyisela i-platform liye lidlula i-$ 107 billion kwii-total sales. Kuthetha ukuba ufumana ngaphezulu kweedola ezili-12,000,000 ngokuthengisa nganye ngeyure ngokuqhelekileyo. Awucinga ukuba la manani ayingxolo? Ndiyakholwa ukuba le statics iyaneliseka kwaye ikhuthaza ukuphuhlisa ishishini kwi-Amazon.
Nangona kunjalo, abaninzi abathengisi be-intanethi banenkxalabo yokuba i-Amazon iya kunqumla kwinzuzo yazo kunye nokunciphisa ukukhula kwamashishini. Ezi nkxalabo azikho into engqiqweni, kwaye inokwenyaniso ngokuxhomekeke kwimizekelo yezoqoqosho. Nangona kunjalo, lo mngcipheko ufanele uwathathe. Ukuphathwa kwe-Amazon kunika iinkonzo ezininzi ze-ecommerce ezinceda abathengisi ukuba benze i-fortune yabo. I-Amazon yenza kube lula ukuphucula izibonelelo zayo kwishishini lakho. Yonke into oyifunayo kukulandela imigaqo yomdlalo we-Amazon.
Iingcebiso zokwandisa ukubonakala kwakho kwi-Amazon yophando
Fumana amanqaku amaninzi
Zibeke kwindawo yabathengi bakho. Xa uthenge kwi-Amazon, yintoni oqhele ukuyijonga kuqala? Kakade ke, ukuhlolwa kwabaxhamli ba kutshanje. Kufuneka uqinisekise ukuba abanye abantu banelisekile ngento oyithengayo. Ngamanye amazwi, abaninzi abathengi badinga ubungqina bentlalo ukuze bathenge isinqumo.
Ngoko ke, kufuneka ukhangele amathuba okufumana iimpendulo ezilungileyo kubathengi bakho bamuva. Unokunika iimveliso zakho okanye unikezele abathengi ngezaphulelo ukuze bafumane ukuhlaziywa okulungileyo nokunyanisekileyo. Iingxelo eziqulethe imifanekiso kunye neevidiyo zibhekwa njengento ebaluleke kakhulu kubathengi bakho abanakho. Udinga ukucela ukuba uhlaziywe ngokufanelekileyo kwaye umvuzo wabathengi emva kokuthenga ukunikela. Kuyacetyiswa ukuba utyalomali ekufakeni uluhlu lokuphucula nokuphuculwa kweenkonzo zamakhasimende ukufumana iimpendulo ezingaphezulu. Kwaye ekugqibeleni, kufuneka uqonde i-Amazon yexabiso lentengo kwaye uhlalutye ixabiso lakho kuyo. Ngokomzekelo, unako ukubonelela abathengi bakho ngezaphulelo kwaye usebenze amaqhinga omhla wokubenza bathembeke kwi-brand yakho. Isicwangciso sokuthengisa kunye nokuphononongwa okuphezulu kunye nokuhlelwa kakuhle kwezinto kunokudala iqhinga lokuphumelela kwe-Amazon.
Ngaphezu koko, kunokuba lunamandla ukufumana ukuphononongwa kwamanye amapulatifomu afana nemithombo yokuphonononga, ii-blogs ezichaphazelekayo, kunye neziteshi zokuzonwabisa ezentlalo ezithandayo.Ngokuphakamisa izibuyekezo zakho kule mijelo, uya kufumana umphumo ongasiphelwanga, ngokukwandisa kakhulu ukuqonda kwegama lakho.
Ulungiselele uluhlu lwemveliso yakho ye-Amazon SEO
uluhlu lwemveliso yakho phambi kwabaphulaphuli abajoliswe kuyo. I-Amazon ineemeko ezahlukeneyo zokubeka iinkcukacha ukuba zeziphi iimveliso eziza kuboniswa kumsebenzisi ngamnye ngokwezikhethi zakhe kunye nomlando wophando. Ngoko, kufuneka uhlalutye ii-SEO zezinto eziphambili ze-Amazon kwaye wenze uluhlu lwakho ngokubhekiselele kubo.
Ingqalelo ekhethekileyo kufuneka ihlawulwe kwisihloko sakho semveliso. Kufuneka iqulethe iimpawu zemveliso ebalulekileyo kunye nemigqaliselo yokukhangela yamanzi ephezulu. Emva koko khangela ukuba uzalisa zonke iipotolo okanye ikhona. Kufuneka baquke kunye nemigqaliselo yakho yokukhangela kwaye ngokukhawuleza babhale izixhobo ezibalulekileyo neempawu. Inkcazo yakho idinga ukuzaliswa okupheleleyo kunye namagama abalulekileyo atyebileyo. Qinisekisa ukuba uluhlu zonke iintlawulo zemveliso yakho kwinqanaba elichazayo.
Qaphela amagama okhangelayo abathengi bakho abanokuyisebenzisa ukufumana iimveliso zakho, kwaye ujonge ukuba yeyiphi iikokisi ezithengisayo iimpahla zakho zentengiso.Kwiimeko ezininzi, kunengqiqo ukusebenzisa imigaqo yosesho emide emininzi abasebenzisi abangayisebenzisa ukufumana izinto ezithile. Le migaqo yophando izokunika amathuba amaninzi ukuphakamisa ireyithi yakho kwi-SERP.
Nangona kuhlale kuphawulekayo ukuqonda ukubaluleka kokulungiswa kwendawo yokukhangela, okokuqala kufuneka kuhlale kuqala. Yingakho kufuneka utyalomle ixesha kunye nemigudu yakho kwiimpawu eziphezulu ukunikela umgangatho wokuqala. Qiniseka ukuba uluhlu lwakho luqulethe imifanekiso esemgangathweni kunye nomxholo wevidiyo.
Khangela amathuba okuqhuba ukuthengisa okungakumbi kwi-Amazon search
Musa ukulinganisela amathuba akho shishini, ukukhuthaza imikhiqizo yakho kuphela kwi-Amazon. Kufuneka ucinge ukuba mkhulu. Kukho amathuba amaninzi okuphromotha kwi-Amazon. Ufumana iimveliso zakho ezibonakalayo kumaphephandaba, sebenzisa iblogi ukuthumela kunye nokusebenzisana nempembelelo yengcamango yakho. Ukongezelela, unokuba nobuchule obuqinileyo kwiingqungquthela kunye neeblogs, amaqela ezentlalo zoluntu kunye nezinye iziteshi.
Isihluthulelo sokuphumelela kwi-Amazon kukuqonda okunzulu kweemarike apho uthengisa khona. Ngoko, kufuneka ukwazi indlela yokubeka uphawu lwakho ngokuchanekileyo kwi-Amazon ukukhangela kwisihlwele. Yenza konke ngomthengi engqondweni, kwaye uza kubona umphumo. Nika abathengi bakho ngeemveliso eziphezulu kunye nenkxaso yokuxhaswa kwamakhasimende. Ngokwenza njalo, uya kuphucula umlando wakho wokuthengisa kwaye ukhangela abathengi abaninzi kwimveliso yakho.
Ukubonelela ngexabiso elikhuphisanayo kwi-Amazon
Ukuba ungumthengisi we-Amazon, kufuneka uthathe inxaxheba kwiimfazwe zentengo nokuba uyayithanda okanye cha. Intengo yokukhuphisana yinkalo ebalulekileyo ye-Amazon ekunceda abathengisi ukuba banqobe ibhokisi lokuthenga. Abathengisi abaninzi abaphumeleleyo bama-Amazon basebenzisa izixhobo ezikhethekileyo zokuhlaziya ixabiso lentengiso kwaye bahlale bekhuphisana.
Nangona kunjalo, kukho nezinye iindlela onokuhlala ngazo kwi-TOP ye-Amazon e-commerce game. Ungagxininisa ekuphuculeni kwakho uphuculo ngokuphendula kuyo yonke imiyalezo ebalulekileyo. Kufuneka uzuze ngokwakho njengomthengisi omhle kwaye unikezele abathengi bakho ngezizathu zokuzikhethela ngaphezu kwabadlali bakho.
Ngaphezu koko, kufuneka uhlale wenze imali yakho ekuthengeni. Ngendlela enjalo, ukuqhuba ezithengisayo ezongezelelweyo kuya kukuvumela ukuba uthenge ngaphezulu kwaye unciphise iindleko zakho zokungcebeleka ekugqibeleni.
Qaphela ukuba ukukhutshwa ngokukhawuleza kunye nokuphuma kwempahla kunokuchaphazela kakubi i-brand brand yakho kunye nokunciphisa ixabiso lemveliso yakho kwi-Amazon. Yingakho kufuneka ujolise ekunciphiseni iimpazamo zokunciphisa izinto ezifana neenqanawa ezingekho phantsi, iiphakheji ezonakalisiweyo, kunye nezinto ezikhoyo ngaphandle. Kubalulekile ukuba iimveliso zakho zihlale zisisitokisini ngenxa yokuba isebenza njengesigqibo sokunqoba ibhokisi lokuthenga kunye nephakamileyo ye-Amazon. Ukuba ungathumela izinto zakho ngokukhawuleza nangokuchanekileyo, i-Amazon iza kukuvuza ngokubaluleka kokuthengisa. Khangela amaqabane kunye namathuba amatsha kwi-Amazon
Kukho amathuba amaninzi okwandisa ukuthengisa kwi-Amazon. Qinisekisa ukuba uyisebenzise konke ukuphucula ingeniso yakho yeshishini jikelele. Unokuzama ukusebenzisana namanye amaxabiso apha kwi-Amazon ukuphuhlisa amandla akho kunye nokufumana amashishini amatsha Source .